हामीलाई कवितामा के चाहिन्छ ? - समय-समाचार
समय-समाचार शनिबार, २०७७ पुस ४ गते, ०८:११ मा प्रकाशित
कवि खालि केमेरा होइन, त कविता फोटो। यद्यपि हामी फोटोलाई कला भन्ने मान्छे पाउँछौँ । चित्रण यान्त्रिक नभए आजसम्म यथार्थवादी कविता संसारले सहेकै छ । मजा लाग्ने उदाहरण पनि पाइन्छन्। तर जहाँ यथार्थवादी कविताले रुलाउँछ, त्यहाँ बाहृय प्रकृतिको फुस्रो चित्रण छोडेर आभ्यन्तरिक हृदयानुभूतितिर डुबेको देखिन्छ । हृदयको रङ राम्ररी नदेखिने कवितालाई हामी ठूलो दर्जा दिन सक्तैनौँ । शब्दले फूल उतार्नु-रङ र रुप साथमा, केही कला हो। तर ‘अहा । क्या फूल उतार्नु- रङ र रुप साथमा, केही कला हो। तर ‘अहा । क्या फूल ।’ यति सौन्दर्यको आनन्द उद्गारित गराउनुमा ज्यादा विशेषता छैन । मानवकलाले प्रकृतिलाई जित्नैपर्छ, बोक्रोभन्दा गहिरो हुनैपर्छ, रुपद्वारा सूचना, रङद्वारा भावना, सुगन्धद्वारा हृदयकेन्द्रको तत्वतिर पुगेको हुनैपर्छ । कविको नजर काँचको आँखा होइन । काँचले पनि आफ्नो तवरले रङगाउँछ । प्रकृतिलाई प्रकृति देख्नु, गुलाफलाई गुलाफै देख्नु, बादललाई बादलै। यो हाम्रो बोक्रे यथार्थता हो । वैदिक कालका मनुष्य हामीभन्दा गहिरा थिए । उनमा ज्यादा भावुकता, ज्यादा जिज्ञासा, ज्यादा रहस्यान्वेषण, सौन्दर्यानुभूति, सत्यचेत पाइन्छन् । उनीहरू सच्चा कवि थिए । हाम्रो आजकलको वस्तुवादी वैज्ञानिकतामा जीवनको स्पन्दन छैन । अत्तरछालाजस्तो खुइलिँदै जान्छ, काँचुली जस्तो बाहिरी शृङ्गारझैँ मालुम हुन्छ । हामी बाहिरी रेखाको लचक विचार गर्छौं, बाहिरी रङ । तर जीवन छ हृदयमा । वैवेदिक ठण्डा चित्रण, वैज्ञानिक परीक्षा नलीमा मिलाइएका रङ, कृत्रिम चमत्कार, शब्दभिमान, विद्वता र बाहिरी चातुरी कविता होइनन् । त्यो कला कला हो जसको वैज्ञानिक विश्लेषण नै छैन, जो हृदयमा चुम्दछ, जो संसारलाई एकछिन सिरिङ्ग पार्दछ, जहाँ मानवकल्पना झुल्किन्छ, जहाँ अपूर्णले पूर्णको चेत पाउँदछ । छोटकरीमा जहाँ सत्यको छाया सुन्दरताको मोहनीसाथ प्रकृतितिर जीवनको पर्दामा पर्दछ ।
यो कविता कति भावप्रधान छ, मानस निर्झर छ पार्थिव निर्झर छैन । कवि प्रखर र वेगशील प्रभातमा नवयुगको नव प्रबोधनमा झल्किन्छ । ‘रवि’-रवीन्द्रको मानस-निर्झरलाई कुन रविको किरणतिर प्रेरणा भयो विदितै छ । ‘पस्दछ प्राणको पर’ । निदि्रत हृदय गहृवारको अँँध्यारोमा प्रवेश गर्दछ, प्राण जाग्छ, जल उछलिन्छ, त्यो निदि्रत सौन्दर्य सलिल, जो स्वर्गबाट झरेर पहाडभित्र घुसेको थियो-भारतमा रवीन्द्र कविताका रुपमा भुल्भुलाउन । प्रकृत कविको सिर्जनप्रेरणा ‘प्राणको वासना प्राणको वेग रोकिई राखिन्न रे ।’ यस्तो दिव्य प्रेरणाको जोड नभई सच्चा कविता, निक्लँदैन आभ्यन्तरिक जोडले पहाड थर्थराउँछ, जीवन कम्पायमान हुन्छ, बाधाको बाँध टुट्दछन्, जडता फुट्दछन्, हुत्तिन्छन्, इन्द्रेणीले रङदार कल्पना- फेनिल कविता सलिल, चम्केर गर्जेर उठ्दछ । जोसमा कवि भन्दछन्- ‘भाँच्रे हृदय भाँच्रे बन्धन, साध्रे आज प्राणको साधन’ लहरीउपर लहरीको आघातउपर आघात गर् । कत्रो जोस । कहाँको अँध्यारो कहाँको पाषाण । भावुक प्रेरणा अज्ञानको सीमा नाघ्छ, बाधाका बाँध टुटाउँछ । प्राण मतबाला भए, वासना उछलिए, तब जगत्मा कसको डर ? पागल सदृश जगत् प्लावित गरेर, गाएर, कविको हृदय जान्न खोज्छ, सङ्गीतमय करुणाधाराको स्वरुपमा फोरेर पाषाणकारा । कवि नवयुग निर्माण गर्ने सबैले यस्तै कारा छिचोलेथे । ‘हास्य छटाई’ – भावोन्मत्त वेगमा, स्वर्गिक आभासका किरणमा झल्झलाउँदै हाँसी, कलकल तालतालमा ताल दिँदै कविहृदय निर्झरीको प्रस्फुटन र गति कमना कति स्पष्ट सङ्केतमा जोसिलो वेगसँग झल्काइएको छ ।
हामी छायावादी कविता यस किसिमका चाहन्छौं- जसमा भावसङ्केत स्पष्टतवर झल्किन्योस्, हृदयस्पर्शिता होस्, कला होस्, केही दिव्य प्रेरणा होस्, जहाँ सत्य नछिपाइयोस्, उद्घाटिन गर्न खोजेझैँ होस् । ‘मलाई यस्तो कविताको प्रेरणा यस्तो सिर्जनको ऐडी आयो’ भनेर यथार्थवादी या वस्तुवादी ढङ्गले जति प्रवल शब्द राखेर बनाए पनि रवीन्द्रको जस्तो जोसिलो वेगको कविता